Ny fiakaran'ny fananganana Wallet nomerika mandritra ny areti-mandringana | Martech Zone
Ny fiakaran'ny fananganana Wallet nomerika mandritra ny areti-mandringana
Alakamisy, Desambra 24, 2020 Alakamisy, Desambra 24, 2020 Tanya Singh
Ny haben'ny tsenan'ny fandoavam-bola nomerika eran-tany dia antenaina hatramin'ny USD 79.3 miliara amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny USD 154.1 miliara amin'ny 2025, amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 14.2%.
Raha jerena indray dia tsy manana antony hampiahiahy an'io isa io isika. Raha misy, raha mitazona ny krizy coronavirus ankehitriny raha dinihina dia hitombo ny fitomboana sy ny fananganana.
Virus na tsia virus, ny miakatra amin'ny fandoavam-bola efa teto. Satria ny poketra finday avo lenta dia eo afovoan'ny fiasan'ny rafitra, nisy fiakarana miharihary ihany koa amin'ny fananganana azy ireo. Saingy hatramin'ny nanaparitahana ny vaovao momba ny fomba ahafahan'ny vola mitondra coronavirus mandritra ny andro maromaro dia nifindra ny sain'ny ankamaroan'ny olona manerantany poketra nomerika.
Fa inona no mahatonga ny poketra finday ho mpandefa andriamanitra ho an'ny vola fiat? Ny valin'ity fanontaniana ity dia miorina amin'ny endri-javatra napetraka. Ity misy lisitr'ireo fiasa tokony hananan'ny fampiharana kitapom-batsy finday:
Fomba tsy maintsy ananan'ny Wallet finday
Fiarovana fanamarinana marobe - Ny endrika voalohany tokony hananan'ny poketra finday nomerika rehetra dia ny filaminana tsy voavaha. Fomba iray hahazoana antoka fa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny rafitra fanamarinana singa marobe. Ny dikan'izany dia ny fanaovana ireo mpampiasa handalo fanamarinana fiarovana farafahakeliny 2-3 alohan'ny hahatongavany amin'ny teboka ahafahan'izy ireo mijery ny fifandanjan'ny kaonty na mandefa vola amin'ireo namany.
Rafitra valisoa - Iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny olona hampiasa poketra nomerika toa ny PayPal na PayTM dia ny rafitra valisoa azon'izy ireo. Isaky ny fifanakalozana izay ataon'ireo mpampiasa amin'ny fampiharana dia tokony homena valisoa izy ireo, izay mety amin'ny endrika kupon na cashback. Ity irery ihany no mety ho fomba tsara hitazomana ireo mpampiasa hiverina amin'ilay fampiharana.
Ekipa Mpanohana Mavitrika - Ny fitarainan'ny mpampiasa matetika amin'ny bankiny dia ny fomba tsy ahafahan'izy ireo mihetsika amin'ny fotoana ilana izany. Rehefa ao anaty fangatahana kitapom-batsy dia misy zavatra maromaro izay mety tsy mety amin'ny mpampiasa iray - mety mandefa ny volany amin'ny olona tsy izy izy ireo, mety mametraka amina diso, na ilay mahazatra indrindra - vola azo avy amin'ny azy ireo. kaonty fa tsy mahatratra ny olona kasaina. Mba hamahana ireo olana ireo sy ny toetran'ny paranoia amin'ny fotoana tena izy dia tokony hisy fotodrafitrasa fanampiana ny fampiharana.
Ankehitriny rehefa nijery ireo endri-javatra izay mampalaza ny kitapom-bola dizitaly isika, andao isika hidina amin'ireo teboka mahatonga antsika hieritreritra fa nisy fiakarana tampoka amin'ny fampiasana ireo poketra finday manerana an'izao tontolo izao.
Ny antony ao ambadik'ity fiakaran'ny vidim-piainana ity amin'ny poketra finday
Ny tahotra sao tratry ny viriosy - Noho ny tahotra sao hahatratra ny virus coronavirus izy ireo dia mijanona tsy hampiasa vola fiat. Saingy mbola tsy manamarina ny fiakaran'ny valizy dizitaly io sa? Satria afaka mampiasa ny carte de debit na carte de crédit-ny foana izy ireo. Eny, izany no teboka. Ireo mpampiasa dia misoroka ny fikasohany na inona na inona - ny milina atm, ny masinina POS, na ny milina hafa ahafahan'izy ireo manao fifanakalozana vola. Ity no antony voalohany mahatonga azy ireo hifantoka amin'ny poketra nomerika tsy misy fifandraisana.
Fampahalalana lehibe kokoa - Zavatra iray hafa izay miasa amin'ny fanasoavana ny kitapom-batsy finday mihamitombo dia ny fahalalan'ireo mpampiasa fintech fahalalana tsara momba ny tombony azony. Hatramin'ny nahatongavan'ny lazan'ny poketra tamin'ny faran'ny fara tampony, ny mpanjifa (izay misy an'arivony taona maro) dia efa nahalala ny fomba fampiasana azy ireo sy ny fomba maha-betsaka azy ireo teboka noho ny fampiasana vola fiat. Ireo kilasin'ny mpampiasa an'arivony taona ireo dia nilalao anjara lehibe tamin'ny fanabeazana ny Generation X sy Boomers momba ny antony tokony hamelana ny vola vetaveta.
Fanekena malalaka - Androany, zara raha misy ny orinasa na hopitaly na sekoly mbola tsy naheno na tsy mampiasa poketra nomerika. Ity fanekena ity dia nahatonga ny fiakaran'ny tahan'ny fananganana hatramin'ny faran'ny mpanjifa ihany koa. Ny fanamorana ny tsy fitondrana vola na ny tsy fahombiazan'ny zero amin'ny fametahana debit na carte de crédit nampidirina tamin'ny fanekena betsaka ny fampiharana kitapom-batsy finday dia nahatonga ny olona hanary vola tanteraka.
Ny fanohanana ny teknolojia - Ny singa manaraka izay nanana ary mbola mitondra fiakarana amin'ny fandraisana ny poketra finday dia ny backup teknolojia. Ireo orinasan-kitapom-bola finday toa an'i Stripe, PayPal, sns dia mitazona ny fahaizana manokana hanolotra fampiharana hack-proof 100%. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fampidirana ny rindranasa amin'ireo API izay mahatonga azy ireo ho sehatra iray hijanonana ho an'ny famandrihana rehetra sy ny filàna fandaniana, ny orinasa dia mampiasa ny lafiny teknika mba hanandramana ny ezaka ho an'ny mpanjifa tsaratsara kokoa, ary kosa, ny mpanjifany dia mamaly amin'ny fifanakalozana azy ireo amin'ny poketra ara-batana.
Ahoana no tokony hamalian'ny mpandraharaha Fintech iray?
Ny valiny mety indrindra tokony hananan'ny mpandraharaha Fintech manoloana ity fiovan'ny fitondrantenan'ny mpanjifa ity dia tokony hitady fomba hanitarana ny maodelin'ny orinasa. Ny zavatra iray izay tsy maintsy marihin'izy ireo dia ny fanalavirana ny fiaraha-monina ho vonona ny ho fitsipika vaovao. Ary toy ny saika ny raharaham-barotra rehetra eto ambonin'ny tany, izy ireo koa dia tsy maintsy mijery ny fomba hahatonga ny traikefan'ny mpanjifany ho tsy azo ifandraisana.
Manantena izahay fa hatramin'izao dia ho afaka nandre izany ianao ahoana ny lanjan'ireo poketra finday nanjary teo amin'ny fiainan'ny tsirairay ary ahoana no fomba tokana handrosoana amin'ny sehatra Fintech.
Miaraka amin'izany fanantenana izany, avelao izahay hamela anao hisintaka:
Ao amin'ny tontolo iainana ankehitriny, ny fandoavana tsy misy vola dia fomba iray lehibe hiarovana ny tenanao sy ny hafa amin'ny fihanaky ny virus coronavirus. Ny fetran'ny karatra tsy misy fifandraisana dia dingana iray mahafinaritra tokoa, na izany aza, raha azo atao, dia ampirisihinay ny mpanjifanay hampiasa poketra nomerika satria manana fiarovana fanampiny izy ireo fa tsy mila miditra PIN amin'ny PIN Pad na firy na firy lanin'izy ireo, satria mampiasa ID ID na Face ID kosa.
Kate Crous, Tale Jeneraly Mpanatanteraka 'banky isan'andro' ao amin'ny Commonwealth Bank of Australia
Mihevitra ve ianao fa ny poketra finday dia mitoetra amin'ny ho avy amin'ny sehatry ny fintech? Mizarà amin'ny hevitra etsy ambany ny hevitrao.
Tags: banky Commonwealth any Aostraliany fandoavam-pifandraisanafandoavana digitalvalisoa nomerikakitapom-batsy nomerikapoketra nomerikafintechKate crousfifanakalozana findayfandoavam-bola amin'ny findaypoketra findayFampiharana poketra findaypoketra findayfanamarinana anton-javatra marobefandoavam-bola smartphone
Tanya dia mpivarotra votoaty fanta-daza fanta-daza izay manana traikefa mihoatra ny dimy taona amin'ny teknolojia vao misondrotra toa ny blockchain, Flutter, Internet of Things eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana finday. Nandritra izay taona rehetra izay dia nanaraka akaiky ny sehatry ny teknolojia izy ary ankehitriny dia manoratra momba ny zava-nitranga farany niseho teo amin'ny tontolon'ny fampiharana.
Valin'ny fanadihadiana: Ahoana ny fandraisan'ny mpivarotra ny areti-mandringana sy ny fanidiana?
IP Mafana: Manaova ny laza vaovao amin'ity rindranasa manafana IP ity